Media sy Fanoratan-gazety · Marsa, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Marsa, 2018
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Marsa, 2018
Liberia 29 Marsa 2018
Nahitàna herisetra indray tao Liberia vao haingana: tovovavy iray no nisy namono, ho valifatin'izany, 4 hafa ihany koa nisy namono tahaka izany tao amin'ny faritra Lofa ao avaratry ny firenena. Nandritra ny korontana, nisy nandoro ireo fiangonana sy ny moskea. Nitantara momba izany korontana izany ny Global Voices.
Afrika Mainty 22 Marsa 2018
Japana: Tantaram-Pitiavana Sy Fankahalàna An'ilay Endrika Famantarana, “Sento-kun”
Azia Atsinanana 18 Marsa 2018
Tiako ho fantatra hoe tahaka ny ahoana ny fivezivezen'ny vola. Ny tiako ho lazaina dia ohatrinona amin'ny hetra aloan'ny mponina